६ घन्टा फेसबुक बन्द हुँदा जुकरबर्गलाई ६ अर्ब घाटा ! - Thulo khabar
६ घन्टा फेसबुक बन्द हुँदा जुकरबर्गलाई ६ अर्ब घाटा !
काठमाडौँ : सोमबार संसारभर विभिन्न मुलुकका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले करिव ६ घन्टा फेसबुक इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएप चलाउन पाएनन् ।
नेटवर्कमा समस्याका कारण सामाजिक सञ्जालका यी साइट बन्द हुँदा फेसबुकका प्रमुख कार्यकारी मार्क जुकरबर्गले ६ अर्बभन्दा बढी अमेरिकी डलर गुमाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
६ घन्टा अबरुद्ध हुँदा फेसबुकको सेयर मूल्य ४.९ प्रतिशतले घटेको छ । सेप्टेम्बरमा मात्रै फेसबुकको सेयर मूल्य झन्डै १५ प्रतिशतले ओह्रालो लागेको छ ।-एजेन्सी
रुसमा कोरोनाका कारण एकैदिनमा अहिलेसम्मकै धेरैको मृ’त्यु !
एजेन्सी : रुसमा को’रोनाभा’इरसका कारण एकैदिनमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरैको मृ’त्यु भएको छ ।
सरकारी अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा को’रोनाका कारण ८९५ जनाको मृ’त्यु भएको छ ।
यो सङ्ख्या रुसमा को’रोनाभा’इरसको महामा’री सुरु भएदेखिकै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै भएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार रुसमा को’रोनाका कारण अहिलेसम्म मृ’त्यु भएकाहरूको कूल सङ्ख्या दुई लाख ११ हजार ६९६ पुगेको छ ।
त्यसैगरी पछिल्लो एक दिनमा २५ हजार ११० जना को’रोनाभा’इरसबाट सङ्क्र’मित भएका छन् । योसँगै कूल सङ्क्र’मितहरूको सङ्ख्या ७६ लाख ३७ हजार ४२७ पुगेको छ ।
अधिकारीहरूका अनुसार रुसमा अहिलेसम्म भा’इरसबाट सङ्क्र|मित भएर पनि अहिले सङ्क्रमणमुक्त भइ’सकेकाहरूको सङ्ख्या ६७ लाख ५९ हजार ५९ रहेको छ । तीमध्ये १८ हजार ५६८ जना पछिल्लो एक दिनमा सङ्क्र’मणमुक्त भएका हुन् ।
रुसमा अहिले पनि दैनिक नयाँ सङ्क्र’मितहरूको सङ्ख्याभन्दा सङ्क्र’मणमुक्त भएकाहरूको सङ्ख्या कम भएको छ । त्यसैले सक्रिय सङ्क्र’मितहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ ।
नयाँ सङ्क्र’मितहरूको सङ्ख्या केन्द्रीय राजधानी मस्कोमा बढेको पनि अधिकारीहरूले जनाएका छन् । स’ङ्क्रमित र मृ’तकहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि रुसमा फेरी को’रोनाभाइर’सको महामा’रीले पार्ने चिन्ता थपिएको छ ।-एजेन्सी